Afaka Mitsangana Amin’ny Maty Isika!
RAHA maty isika, haniry hanangana antsika, na hamelona antsika indray, ve Andriamanitra?... Nino izany i Joba, lehilahy tsara fanahy. Koa rehefa noheveriny fa efa ho faty izy, dia niteny tamin’Andriamanitra izy hoe: ‘Hiantso ianao, ary izaho hamaly anao.’ Nilaza i Joba fa halahelo azy, na haniry mafy hanangana azy amin’ny maty, i Jehovah Andriamanitra.​—Joba 14:14, 15.
Toa an’i Jehovah Andriamanitra Rainy i Jesosy, ka maniry hanampy antsika koa. Rehefa niteny taminy ny boka iray hoe ‘Raha mety ianao, dia mahay manadio ahy’, dia hoy i Jesosy: “Mety aho.” Dia nositraniny ilay boka.​—Marka 1:40-42.
Ahoana no nampisehoan’i Jehovah fa tia ny ankizy kely izy?
Ny Rainy no nampianatra an’i Jesosy ho tia ankizy. Taloha ela be, dia indroa i Jehovah no nampiasa ny mpanompony hanangana ankizy tamin’ny maty. Niangavy an’i Jehovah i Elia mba hanangana ny zanakalahin’ny vehivavy iray nandray tsara azy. Dia nataon’i Jehovah izany. Nampiasa an’i Elisa mpanompony koa i Jehovah mba hanangana ankizilahy iray.—1 Mpanjaka 17:17-24; 2 Mpanjaka 4:32-37.
Tena mahafinaritra ny mahafantatra fa tia be antsika i Jehovah, sa tsy izany?... Tsy amin’izao mbola velona izao ihany isika no ao an-tsainy, fa ho tadidiny koa isika na dia sanatria aza ka maty. Nolazain’i Jesosy fa heverin’ny Rainy ho velona foana ireo olona tiany, na dia efa maty aza! (Lioka 20:38) Resahin’ny Baiboly fa ‘na fahafatesana, na fiainana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra.’—Romanina 8:38, 39.
Nasehon’i Jesosy, tamin’izy tetỳ an-tany, fa miahy ny ankizy madinika i Jehovah. Tadidinao fa naka fotoana i Jesosy mba hiresahana momba an’Andriamanitra tamin’ny ankizy. Fantatrao ve anefa fa nomen’Andriamanitra hery izy hananganana ankizy tamin’ny maty?... Andeha horesahintsika ny nananganan’i Jesosy ny zanakavavin’ny lehilahy iray nantsoina hoe Jairo. Roa ambin’ny folo taona ilay ankizivavy.
Nipetraka tany akaikin’ny Ranomasin’i Galilia i Jairo, niaraka tamin’ny vadiny sy ny zanany vavitokana. Narary mafy ilay ankizivavy, indray andro, ary hitan’i Jairo fa efa ho faty izy io. Nieritreritra an’i Jesosy izy, satria efa reny fa nahay nanasitrana i Jesosy. Nandeha nitady azy àry i Jairo. Hitany nampianatra olona maro be teo amoron’ny Ranomasin’i Galilia i Jesosy.
Namakivaky an’ilay vahoaka i Jairo ary nandohalika teo anoloan’i Jesosy, sady niteny hoe: ‘Marary mafy ny zanako vavy kely ka avia mba vonjeo e! Mba andao re e!’ Tonga dia niaraka tamin’i Jairo i Jesosy. Nanaraka azy ireo koa ilay vahoaka tonga hijery an’ilay Mpampianatra Lehibe. Rehefa lasa lavidavitra anefa ry zareo, dia nisy lehilahy avy tany amin-dry Jairo nifanena taminy, ary niteny hoe: ‘Maty ny zanakao, ka nahoana no mbola manahirana ny Mpampianatra ihany ianao?’
Ren’i Jesosy ny tenin’ireo lehilahy ireo. Fantany fa nalahelo be i Jairo noho ny nahafatesan’ilay zanany vavitokana, ka hoy izy taminy: ‘Aza matahotra. Minoa fotsiny an’Andriamanitra, dia ho velona ny zanakao.’ Nanohy ny diany hatrany an-tranon’i Jairo izy ireo. Efa nitomany ireo naman-dry Jairo tao, satria nalahelo an’ilay zazavavy maty. Hoy anefa i Jesosy: ‘Aza mitomany fa tsy maty izy, fa matory.’
Nihomehy ny olona, rehefa nilaza izany i Jesosy, satria fantany fa maty ilay ankizivavy. Nahoana àry i Jesosy no nilaza fa natory izy?... Inona no fianarana tiany horaisin’ireo olona ireo, araka ny hevitrao?... Tiany ho fantatr’izy ireo fa toy ny olona matory be ny olona maty. Te hampianatra azy ireo izy fa vitany tsara ny mamoha olona efa maty, toy ny mamoha olona matory, noho ny herin’Andriamanitra.
Inona no ianarantsika avy amin’ny nananganan’i Jesosy ny zanakavavin’i Jairo?
Nasain’i Jesosy nivoaka ny olona rehetra, afa-tsy i Petera sy Jakoba ary Jaona apostoliny, sy ny ray aman-drenin’ilay ankizivavy. Avy eo dia nankao amin’ny efitra nisy an’ilay zaza izy, ka nandray ny tanany ary niteny hoe: “Ry zazavavy, miarena!” Tonga dia niarina ilay ankizivavy ary nandeha! Faly erỳ ny ray aman-dreniny.—Marka 5:21-24, 35-43; Lioka 8:40-42, 49-56.
Eritrereto indray izao. Raha afaka namelona indray an’io ankizivavy io i Jesosy, ho afaka hamelona olon-kafa indray koa ve izy?... Tena hanao izany ve izy, araka ny hevitrao?... Ie, hanao izany izy. Hoy i Jesosy: ‘Ho avy ny andro izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feoko, dia hivoaka izy.’—Jaona 5:28, 29.
Maniry hanangana ny olona amin’ny maty ve i Jesosy, araka ny hevitrao?... Hanampy antsika hamaly io fanontaniana io ny ohatra iray hafa ao amin’ny Baiboly. Malahelo an’ireo nidonam-pahoriana i Jesosy. Manaporofo izany ny zava-nitranga indray andro, tany akaikin’ny tanànan’i Naina.
Nisy vehivavy iray, niaraka tamin’ny olona avy tao Naina, handeha handevina ny zanany lahy. Efa maty vady izy, ary maty indray izao ny zanany lahitokana. Tena nalahelo be izy! Maro tamin’ny mponina tany Naina no nanotrona azy, rehefa nentina nivoaka ny tanàna ny fatin-janany. Nitomany ilay vehivavy, nefa tsy hitan’ny olona izay hampiononana azy.
Sendra nanatona ny tanànan’i Naina i Jesosy sy ny mpianany tamin’io andro io. Nifanena tamin’ny mpandevina izy ireo, teo akaikin’ny vavahadin’ny tanàna. Nalahelo an’ilay vehivavy i Jesosy, rehefa nahita azy nitomany. Ory izy nahita ny alahelony, ka te hanampy azy izy.
Feno fitiavana nefa hentitra i Jesosy, ka nanjary nihaino azy ilay vehivavy. Hoy izy taminy: “Aza mitomany.” Nanjary liana be ny rehetra, ka nibanjina an’i Jesosy rehefa nahita ny fihetsiny sy ny zavatra nataony. Nanatona an’ilay faty izy, ka tsy maintsy ho nanontany tena ireo olona ireo hoe inona no hataony. Niteny i Jesosy, ka nandidy hoe: ‘Ry tovolahy, hoy izaho aminao hoe miarena!’ Tonga dia niarina ilay ankizilahy, ary nanomboka niteny.—Lioka 7:11-17.
Alao sary an-tsaina hoe nanao ahoana ilay vehivavy! Hanao ahoana ianao rehefa handray havan-tiana tafatsangana amin’ny maty?... Tsy mampiseho ve izany fa tena tia ny olona i Jesosy, ary te hanampy azy?... Alao sary an-tsaina ny fahafinaretana ho tsapa ao amin’ny tontolo vaovaon’Andriamanitra, rehefa handray an’ireo tafatsangana amin’ny maty ny olona!—2 Petera 3:13; Apokalypsy 21:3, 4.
Milaza inona ny fitsanganan’ny zanaka lahitokan’ity vehivavy ity tamin’ny maty?
Olona efa fantatsika ny sasany amin’ireo hatsangana amin’izay fotoana izay, anisan’izany ny ankizy. Ho fantatsika izy ireny, tahaka ny nahafantaran’i Jairo ny zanany vavy natsangan’i Jesosy tamin’ny maty. Hatsangana koa ireo olona maty efa an-jato na an’arivo taona lasa. Tsy hadinon’Andriamanitra izy ireny, na dia maty efa ela be aza.
Mahafinaritra tokoa ny mahafantatra fa tena tia antsika i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Zanany, sa tsy izany?... Tian’izy ireo ho velona isika, tsy hoe mandritra ny taona vitsivitsy monja, fa mandrakizay mihitsy!
Momba ny fanantenana mahafinaritra omen’ny Baiboly an’ireo maty, dia vakio ny Isaia 25:8; Asan’ny Apostoly 24:15; 1 Korintianina 15:20-22.
Hizara Hizara Afaka Hitsangana Amin’ny Maty Isika!
Natsangan’i Jesosy Tamin’ny Maty ny Zanakalahin’ny Mpitondratena Iray